४४ लागे ऋतिक: मेक्सिकन गर्लफ्रेण्डदेखि पत्नीसँग डिभोर्ससम्म यस्ता छन् उतारचढाव – SawalNepal
४४ लागे ऋतिक: मेक्सिकन गर्लफ्रेण्डदेखि पत्नीसँग डिभोर्ससम्म यस्ता छन् उतारचढाव
By सवालनेपाल	 प्रकाशित समय २०७४, २७ पुष बिहीबार १६:४७
मुम्बई । दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी सुन्दर पुरुषको उपाधि पाएका अभिनेता ऋतिक रोशन आजदेखि ४४ वर्षमा प्रवेश गरेका छन्। ऋतिक करियरमा जति सफल छन् आफनो निजी जीवनमा त्यति नै विवादित पनि । ऋतिक आफ्ना अफेयरलाई लिएर हरसमय चर्चामा रहन्छन्।
बाहिरी अफरले उनको घर समेत उजाडियो, पत्नी सुजैन खानसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो ।
२०१० मा रिलिज भएको फिल्म काइट्सको सेटमा ऋतिक र मेक्सिकन अभिनेत्री बारबरा मोरीको अफेयर निकै चर्चामा रह्यो । यी मेक्सिकन सुन्दरीसँगको अफेयरले ऋतिकको वैवाहिक जीवनमा प्रभाव पार्यो ।
२०१७ को फिल्म क्रिस ३ को सेटमा कंगना रनावत र ऋतिकबीच अफेयरले निकै चर्चा पायो । कंगनाले ऋतिकलाई सार्वजनिक रुपमै मूर्ख पूर्व ब्वाईफ्रेण्ड भनेपछि यी दुईबीच विवाद अदालतसम्म पुग्यो ।
फिल्म ब्याङ ब्याङको शुटिंगका क्रममा ऋतिक कट्रिना कैफसँग नजिकिएका थिए। पत्नी सुजैनसँग सम्बन्ध विच्छेदपछि भएको यो सम्बन्धले ऋतिकको मुहारमा मुस्कान ल्यादिएको चर्चा भएको थियो । तर, दुबैले सम्बन्ध छ भन्ने कुरा अस्वीकार गरे ।
सन २००० को फिल्म ‘कहो ना प्यार है’ बलिउडमा डेब्यू गरेका ऋतिकको त्यो बेला करिना कपुरसँग अफेयरको खुबै चर्चा थियो । त्यो बेला करिनालाई फिल्ममा ल्याउने कुरा थियो तर अमिषा पटेललाई ल्याइयो । किनकि त्यो बेला ऋतिक पत्नी सुजैनका साथै करिनासँग पनि डेटमा थिए । जसका कारण सुटिंग प्रभावित हुनसक्थ्यो ।
यसरी ऋतिकको घरबाहिर चलिरहेको अफेयरका कारण पत्नी सुजैनले २०१४ मा अलग हुने निर्णय गरेकी थिइन् । हाल ऋतिक सिंगल छन् । उनी पिता एवं निर्देशक राकेश रोशनसँग बसिरहेका छन्।
भेटिएनन् नवराज सिलवाल ! अब के हुन्छ ?
बिल गेट्सलाइ पछार्दै विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने अमेजनका मालिक, कति होला उनको सम्पति ?
फ्यानले दिएको गिफ्ट अनुष्का र बिराटले अस्वीकार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
हास्यकलाकार तथा समाजसेवी सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’को आज जन्मदिन
यी हुन् बलिउडमा धनी अभिनेत्री